Gudoomiyaha Cuomo Wuxuu Soosaaraa Barnaamijka Xashiishka Xirfadeed ee Sharciyeynta • Daroogada Inc.eu
Gudoomiyaha Cuomo wuxuu soosaaraa barnaamij sharciyeyn xashiishad xirfadeed
Guddoomiyaha New York wuxuu ka shaqeynayaa soo-jeedin ballaaran oo loogu talagalay barnaamijka xashiishka adag. Soo jeedinta in la dhiso Xafiiska cusub ee Maareynta Cannabis waa in la xakameeyo isticmaalka madadaalada iyo caafimaadka ee dadka waaweyn ee gobolka.
1 Cannabis ku yaal New York
2 Ciqaab dhimista dambiyada xashiishka
Intaa waxaa sii dheer, qaab dhismeed waa in loo sameeyaa ikhtiyaarrada shatiga ee suuqa xashiishadda. Markii la dhaqan galiyo, sharciyeynta waxaa la filayaa inay ka soo xarooto wax ka badan $ 300 milyan oo canshuur ah.
Cannabis ku yaal New York
In kasta oo caqabado badani jiraan New York Intii lagu gudajiray Cudurka faafa ee COVID-19, waxay kaloo abuurtay fursado dhowr ah oo lagu saxayo qaladaadka muddada dheer iyo dhisida New York si ka wanaagsan sidii hore, ”ayuu yiri Guddoomiye Cuomo. Sharciyeynta iyo sharciyeynta suuqa xashiishka qaangaarka ah kaliya fursad uma siinayo soo saarista dakhli aad loogu baahan yahay, laakiin sidoo kale waxay awood noo siineysaa inaan si toos ah u taageerno shakhsiyaadka iyo bulshooyinka sida aadka ah waxyeellada u geystey tobanaan sano oo mamnuuc ah xashiishka
Soo jeedinta gudoomiyaha ayaa ku dhismeysa sanado badan oo shaqo ah in laga mamnuuco xashiishka isticmaalka dadka waaweyn. In 2018, Wasaaradda Caafimaadka, oo uu hogaaminayo Guddoomiyaha Cuomo, waxay sameysay daraasad lagu ogaaday in saameynta wanaagsan ee sharciyeynta xashiishka ee dadka waaweyn ay aad uga culus tahay dhinacyada xun. Waxay sidoo kale ogaatay in tobanaan sano oo mamnuucista xashiishadda ah ay ku guuldareysatay inay gaarto yoolalka caafimaadka bulshada iyo badbaadada waxayna u horseedday xarig iyo xukunno aan caddaalad ahayn, gaar ahaan bulshooyinka midabka leh.
Ciqaab dhimista dambiyada xashiishka
2019, Guddoomiyaha Cuomo wuxuu saxiixay sharci lagu xukumayo ciqaabta haysashada marijuana sharci darrada ah. Sharciga ayaa sidoo kale soo saaray dacwad ah in lagu dhufto rikoodh dembiyeed oo ku saabsan xukunnada marijuana qaarkood. Dabayaaqadii sannadkaas, guddoomiyuhu wuxuu hoggaamiyay shir ka dhacay gobollo badan oo looga arrinsanayay qaabab loo sharciyeeyo xashiishka qaangaarka ah, kaas oo lagu hubinayo caafimaadka bulshada iyo amniga.
Soo jeedinta ujeedadeedu waa inay dhiirrigeliso adeegsiga mas'uulka ah iyo soo bandhigida xakamaynta tayada iyo nabadgelyada oo adag. Oo ay ku jiraan xeerarka baakadaha, calaamadeynta, xayeysiinta iyo tijaabinta dhammaan waxyaabaha xashiishka. Xakamaynta xashiishadda waxay sidoo kale bixisaa fursad lagu maal-galiyo cilmi-baarista.
Akhri wax dheeraad ah gudoomiye.ny.gov (Source, EN)
Kaydka xashiishadda ayaa hoos u dhacay Khamiista. Tilray, Aphria, Aurora Cannabis, Cronos iyo Canopy Growth dhammaantood waxay ku dhaceen ballaadhinta ballaaran ...
Rotterdam kama sugeyso mamnuucida gaaska qosolka leh
Hadal maya laakiin ficil. Rotterdam, ma sugaan aqlabiyadda baarlamaanka inta laga mamnuucayo gaaska qosolka ...